FDA kwadoro Lorcaserin HCL maka ọgwụgwọ oke ibu
13. Lzụta Lorcaserin HCL Online
Ntre, nso idi ukpụhọde ke ufọt ibu ye ibu? Ọ bụrụ nchịkọta ahụ gị (BMI) karịrị 30kg / m2, I buruzie ibu. Ọ bụrụ na uru ahụ dị n'etiti 25 na 29.9kg / m2, nke ahụ bụ ibu arọ. Kedu Ka Synephrine HCL Si Arụ Ọrụ Gị?
FDA anabataghị ojiji nke mgbakwunye lorcaserin n'ihi mkpa ọha mmadụ ma ọ bụ ịdị irè ya na igbochi oke ibu. Isi ihe kpatara nkwado ya bụ isi ọmụmụ US nke emere na afọ 3.3.
N'okwu a, mmekọrịta nke lorcaserin na 5-HT2C bụ 100x karịrị 5-HT2B ndị nabatara. Nchịkọta ụbọchị a bụ maka ọrụ njikọta. Ọ bụrụ na ị overụbiga ya oke, ị ga-agabiga oke oke ma ego ọzọ ga-agbakwunye ndị ọzọ nabatara ya. Ebe ebido 5-HT2B akpata ọrịa obi valvular, ihe na-akpali 5-HT2A eme ka mgbanwe uche, mmetụta 'elu', euphoria, na hallucinations.
Nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ (FDA) bu ụzọ kwado ọgwụ Belviq maka ndị okenye toro eto na US na 2012. Ikike a mere afọ atọ mgbe Arena Pharmaceuticals na Eisai Inc. gbara akwụkwọ NDA (Ngwa Ọgwụ Ọgwụ ọhụrụ) maka Lorcaserin. O weghaara FDA afọ abụọ iji nweta data ahụ, tinyere ihe ọmụmụ gbasara ọmụmụ ihe metụtara lorcaserin, tupu ikpe ikpe ikpeazụ.
Solubility (25 Celsius C) · Mmiri
Kwe ka m kọwaa ya na sayensị… Belviq na Central Nervous System (CNS) na-emekọrịta, ọkachasị na hypothalamus. Ọgwụ ahụ na-elekwasị anya na 5-HT2C ndị natara, nke a na-ahụ na pro-opiomelanocortin neurons n'ime eriri arcuate. Omume a na-eme ka ntọhapụ nke alpha-MSH, nke bụ hormone na-eme ihe melanocortin-4-receptors iji gbochie agụụ mmadụ. Akụkụ ụbụrụ a na-achịkwa agụụ ka ọ bụrụ na arụ ọrụ, ọ ga-egosi ahụ na ị juputara n'ọtụtụ oge.
Mgbe a takenụrụ ya, ọgwụ ahụ na-ebelata oriri nke nri ma na-eweta mmetụta nke satiation. Agbanyeghị na ị ka ga-eri nri na-edozi obere kalori, Belviq ga-achịkwa agụụ gị. Ga-ejupụta na iri obere nri. Na-eduzi na Uru Uru na Egwu Ejila
Ọgwụ ndị na-ebu ibu dị ka wort na tryptophan nke St John
Rịba ama na lorcaserin na-eme ka ndị ọrịa buru oke ibu. Ọ bụrụ na ị nwere ụdị ọrịa shuga nke Abụọ, ị nọ na nsogbu nke ịnwe oke shuga dị n'ọbara mgbe ị na-ewere pill. Ya mere, ị kwesịrị ịdị na-enyocha ogo shuga shuga gị oge niile ma na-akpọtụrụ dọkịta gị ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa ịgbanwe usoro onunu ogwu.
Mee ka onye na-ere ọgwụ mara banyere mgbakwunye nri, ahịhịa, ma ọ bụ ngwaahịa na-ebu ibu ị na-ewere.
Lorcaserin yiri ka ọ bụ nnukwu onye iro maka nne. Mbadamba ụrọ ahụ abụghị maka gị ma ọ bụrụ na ị dịla ime ma ọ bụ na-ezube ịtụrụ ime n'oge ọ bụla. Ogwu a nwere ike imebi nwa ebu n’afọ gị nke na-ebute nsogbu na nwa ebu n’afọ. Ozugbo ị matara na ị dị ime mgbe ị na-ewere ọgwụ ahụ, kpọtụrụ dọkịta gị ozugbo maka ụfọdụ ndụmọdụ.
Belata calorie na nri gị ma gbalịsie ike ịdị na-emega ahụ oge niile. Site n'ime nke a, na-eme ka ahụike gị dịkwuo elu ma na-eme ka usoro abụba na-ere ọkụ. Lorcaserin na-arụ ọrụ nke ọma na mmega ahụ.
Jide n'aka na ị ga-ekpughere onye na-ere ọgwụ gị ọgwụ ọ bụla, mgbakwunye, ma ọ bụ ngwaahịa ị na-ebu tupu ma ọ bụ mgbe ị nọ na Belviq
Zere ịrụ ọrụ igwe dị egwu ma ọ bụ ịnya ụgbọ ala, ebe ọ bụ na ọgwụ ahụ nwere ike igbochi itinye uche gị, ebe nchekwa, na ikike ị paya ntị. Naanị mee nke a ma ọ bụrụ na ị kwenyesiri ike na ụda olu anaghị emetụta ọnọdụ uche gị
Ejila lorcaserin ma ọ bụrụ na ị buru ibu ma ka dị obere karịa afọ 18
Were lorcaserin na ihe ize ndụ gị ma ọ bụ jiri nlezianya kachasị mgbe ị nwere ọnọdụ ndị a;
Akụkọ banyere bradycardia (nwayọ obi nke <50BPM)
Chekwaa ọgwụ a n'ime akpa ejiri kaa akara, ọkacha mma n'ime arịa ọ batara. Debe ya na mmiri na oke okpomọkụ. Agbanyeghi enweghi otutu nchekwa nchekwa, enwere uru ọ bụla n'ime ọnọdụ ọkọlọtọ. 25 Celsius C zuru oke mana oke 15 - 30 Celsius C ka dị mma.
Mkpọchi ọgwụ ọjọọ na-egbu egbu lorcaserin na ọnọdụ echedoro iji gbochie nnweta site n'aka ndị enweghị ikike. Rịba ama na ọgwụ ahụ bụ ihe a na-achịkwa ma enwere ike ịmegbu ya. E wezụga nke ahụ, ọ nwere ike ịbụ nsị na-egbu ụmụaka ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ na-ewere ya na-enweghị ndenye ọgwụ dọkịta.
Bọchị 30 ga-enweta ego 330. Insurancefọdụ mkpuchi anaghị ekpuchi ụgwọ ịzụta ọgwụ ahụ. N'ọnọdụ dị otú a, otu onye ga-adabere na Kupọns nke onye nrụpụta na kaadị mbelata pụrụ iche ma ọ bụ gwuru miri na akpa ha. Mgbe ị nwere obi ụtọ, ị nwere ike ịkwụ ụgwọ obere $ 50.
FD & C Yeeja # 6
Ọnụ ego nke lorcaserin hydrochloride (846589-98-8) dabere na ọnọdụ gị, ụlọ ahịa ị na-azụ na ya na oke ajuju. Dịka ọmụmaatụ, milligram nke ngwaahịa a ga-efu gị ihe ruru $ 50. Agbanyeghị, ịga maka ọnụ ọgụgụ buru ibu nwere ike belata ọnụahịa gaa 1g kwa dollar ma ọ bụ ihe pere mpe.
Otu karama Belviq nwere 60 capsules (Belviq XR® nwere mbadamba 30) ga-eme ka ị daa otu ọnwa ma ọ ga-efu n'etiti $ 220 na $ 330. Ọnụahịa ahụ dabere na mkpụrụ osisi lorcaserin ị ga-ewere ebe ọ bụ na Belviq XR® na-efu dollar ole na ole karịa Belviq. Fọdụ ụlọ ọrụ ịnshọransị nwere ike kpuchido akụkụ ụfọdụ nke ebubo ahụ, wee si otú a na-ahapụrụ gị obere ego ịkwụ E wezụga nke ahụ, ịnwere ike ịnweta ụfọdụ kaadị pụrụ iche na kaadị mbelata site na Belviq, na-eme ka ị kwụọ obere.
Imirikiti ụlọ ahịa dị n'ịntanetị chọrọ ka ị deba aha na ha, mepụta ọnụ ụzọ nke aka gị, ma lelee ọnụahịa. Nwere ike ịgbakwunye ọnụọgụ ụgbọ gị ma tinye iwu. Enweghị ụgwọ ụgbọ mmiri pụrụ iche ebe ọ bụ na HCL na-ekwu okwu adịghị mma maka ụdị njem ọ bụla.
Mkpụrụ ọgwụ Lorcaserin nwere ike ibute mmebi valvụ obi n'ihi ọrụ nke 5-HT2B ndị natara. Otú ọ dị, mmetụta a nwere obere ọnọdụ n'ihi na ọgwụ ahụ nwere njikọ dị elu maka 5-HT2C karịa ndị natara 5-HT ndị ọzọ. Nnyocha na-egosi na pasent nke ndị na-eburu ndị mmadụ na ìgwè na placebo agaghị egosipụta ọdịiche dị ịrịba ama mgbe a nwalere ha maka ọrịa obi valvular.
Site na nyocha nke lorcaserin anyị nwere ike ịlele, ọtụtụ mmadụ kwuru na ha furu n'etiti 10 - 15lbs site na ọnwa mbụ.
Ọgwụ ọgwụ ọnwụ Lorcaserin bụ maka ndị ọrịa buru oke ibu na oke ibu, ọkachasị ndị na-arịa ọrịa metụtara oke ibu. Ọgwụ a nwere ọtụtụ ihe egwu na-eyi ndụ egwu na nsonazụ na ahụ mana ozugbo ị gbasoro ndụmọdụ dọkịta ahụ, ị ​​ga-anọ n'akụkụ dị nchebe.